Iindaba - Izibane zaNgaphakathi - Amandla vs
Nazi izibane ozidingayo ukuze ufumane izityalo ezisemgangathweni ngelona xesha lifutshane linokwenzeka:
Isibane sokukhula kwelothe
Zilula kakhulu ukuseta kwaye ezincinci ziyiplagi kunye nokudlala. Emva kokuzincamathela eludongeni, ungazixhoma phezu kwezityalo. Ukuba ufuna ukuseta olulula ukwandisa isivuno sakho sesityalo, kufuneka usithenge. Nangona zibaleka kancinci kushushu, kuya kufuneka usete iifeni zokukhupha kwaye ulungiselele ukuhamba komoya kunye nobushushu kwindawo yakho ekhulayo. Oku kuya kuqinisekisa isivuno somgangatho ophezulu kwizityalo zakho.
Ukukhula ukukhanya kwe-metal halides kwinqanaba lezityalo
Isibane sokukhula se-Metal halides luhlobo lomthombo wokukhanya wokukhupha amandla aphezulu kunye nokusebenza okuphezulu. Baza nento edibeneyo kunye ne-hood yokubonakalisa kunye ne-ballast yangaphandle. Zivelisa ubushushu obuninzi kwaye ke zifuna umoya ofanelekileyo. Kunye noxinzelelo oluphezulu lwesodium, ezi bhalbhu zivelisa eyona mveliso ilungileyo ngewatt nganye yombane nangakuphi na ukukhanya okukhoyo okukhulayo. Ngenxa yoko, zisetyenziswa ngokubanzi ngabalimi abanamava kwinqanaba lokugqibela lophuhliso lwezityalo. Zinombala oluhlaza okwesibhakabhaka, obaluleke kakhulu kwinqanaba le-trophic.
Uxinzelelo oluphezulu lwesodium lukhula lula ekudubuleni
Njengakwizibane zesinyithi ze-halide, ezi zibane kufuneka zisebenzise isigqubuthelo sokukhanya kunye nomoya. Babelana ngeempawu ezifanayo njengeentsimbi ze-halide bulbs, ngoko zinokusetyenziswa kwizigaba zeentyantyambo kunye nezityalo. Umbala otyheli oveliswa zezi zibane udlala indima ebalulekileyo ekukhuleni kwamathupha kwaye ukwabalulekile ngexesha lokudubula kweentyatyambo.
Ifoto yokukhula kweFluorescent-iklonie izityalo eziselula
Izibane zeFluorescent zibalulekile kumanqanaba okuqala obomi bezityalo. Basebenzisa umbane omncinci, banexabiso eliphantsi, kwaye bathandwa ngabalimi abasakhulayo, nto leyo eyenza kube lula ukuzifumana. Kwimveliso yobungcali, kuya kufuneka ube nesibane sokukhula se-T5. Isibane sisetyenziswa kakhulu ekuhlwayeleni, kwi-cloning kunye nezithole. Ngelixa izibane ze-T5 zezona zilungele izityalo ezincinci, kuya kufuneka usebenzise izibane zamandla aphezulu njenge halides zesinyithi okanye i-HP kumanqanaba amva okukhula kwesityalo.